Ukukhuphuka Kokukhangisa Kwamaselula | Martech Zone
Ukukhuphuka Kokukhangisa Kwamaselula
NgoMgqibelo, Okthoba 1, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 U-Adam Encane
Ngaphezulu kwesigidi esingu-1 samadivayisi we-iOS ne-Android acushwa nsuku zonke! Kunesizathu sokuthi sichitha isikhathi esiningi sigxile Kokumakethwa Kwamaselula. Akuzona izinombolo eziphelele, noma. Ukuziphatha kwabathengi namabhizinisi kuyashintsha - thina funda i-imeyili yethu kumadivayisi eselula manje. Sicwaninga izinkampani ngenkathi sisalinde indiza elandelayo. Sibamba iqhaza emithonjeni yezokuxhumana kanye nezinsizakalo ze-geolocation nsuku zonke ngenxa yeselula.
Njengalo lonke ushintsho kwezobuchwepheshe… sibuka njengoba ukutholwa kulandelwa ukumaketha. IMicrosoft Tag ihlanganise le infographic ku ukwanda nokuwa kwezikhangiso - ukuqagela ukuthi ukukhula kuphi? Abathole kusengaphambili benza inzuzo enkulu ngokubamba iqhaza emakethe, labo abangamukeli emuva basala emuva… abaningi behluleka ngokuphelele.
Qaphela: Ukuvota kwethu kweZoomerang kuleli sonto kuthinta lokhu… ingabe isiza sakho silungiselelwe amadivayisi eselula?
Ukusetshenziswa Nemiphumela Kwamabhizinisi Amancane
May 1, 2014 ku-12: 25 PM
Ukukhangiswa kwamaselula nokwendabuko kuthola ukuthandwa okwandayo. Ngabasebenzisi abaningi bezokuxhumana ababheka ama-akhawunti abo ngamadivayisi eselula kunamakhompiyutha abo, izikhangiso ezisakazwayo ezisakazwa ngokushesha ziba yindlela ekhethiwe yabakhangisi yokuthola umyalezo wabo phambili naphakathi nendawo. Le infographic inikeza ukubukeka okujulile ekukhuleni kokukhangisa kweselula nokwendabuko futhi inikeza izibikezelo ngekusasa.